ASSOCIATION LA CHARITE MADAGASCAR : Notolorana « poches à urines » miisa 100 sy nanamboarana vovon-drano ny CSBII Soavinimerina - Journal Madagascar
ASSOCIATION LA CHARITE MADAGASCAR : Notolorana « poches à urines » miisa 100 sy nanamboarana vovon-drano ny CSBII Soavinimerina
Fiarahamiasa amin’ny Housseni Groupe France. Ankoatra ny rano fisotro madio, fizarana kit scolaire dia manao asa soa amin’ny sehatry ny fahasalamana ny « association La Charité Madagascar ». Noho ny fiarahamiasa amin’ny Housseni Groupe France dia « poches à urines » 1500 isa no ho zaraina manerana ireo CSBII any ambanivohitra ho an’ny eto Antananarivo. Niroso tamin’ny fanomezana ny anjaran’ny CSBII Soavinimerina ny Filohan’ny « association La Charité Madagascar, Zouber Assenjee ny 08 aprily 2020. Nambarany fa fikambanana tsy manao politika, tsy misy resaka antokom-pivavahana fa manao asa soa ho an’ny mpiara-belona ny association la Charité Madagascar. « Ho fanamaivanana ny fahasahiran’ireo tratry ny aretina « prostate » no anton’izao fanomezana izao”, hoy izy.
Ankoatra izany, manohana ny fikambanana amin’ny fanamboarana vovon-drano manerana an’i Madagasikara ny filohan’ny Housseni Groupe France sady teratany Malagasy, Daniel Ismael. Fatsakana miisa 182 no efa vita ary anisany nisitraka izany ny CSBII Soavinimerina. Feno roa taona ihany koa ny fiarahamiasan’ny roa tonta tamin’ny fizarana sakafo eny amin’ny fokontany, in-droa isan-kerinandro. “Zaza 200 isaky ny fokontany eto Antananarivo no mahazo izany saingy najanona aloa ny fizarana noho ny tsimokaretina coronavirus”, hoy i Zouber Assenjee.
Covid-19 : Ambatovy offre 5 200 combinaisons de protection aux personnels médicaux